steem – @mmunited
ကျွန်တော်က Steemmonsters ဂိမ်းကစားဖို့ပဲပြောနေတယ်။ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရမယ်ပဲပြောနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လို အရောင်းအဝယ်လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို မပြောမိဘူး။ အခုပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကပုံမှာပြထာသလို market ဆိုတဲ့နေရာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းနဲ့သုံးတာ ဆိုရင်တော့ ညာဘက်က dropdown menu ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ context menu တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိအထဲကမှ market ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Editition ဆိုတဲ့နေရာမှာ beta ကိုရွေးပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင် beta ကဒ်တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိအထဲကမှ ကိုယ်ရောင်းချင်တဲ့ ကဒ်ရဲ့ ဈေးနှုန်းကို စစ်ကြည့်ပါ။ Giant Roc ဆိုရင် cards တစ်ခုကို 0.04 တန်ကြေးရှိပါတယ်။ Malric Inferno ဆိုရင် 0.28 တန်ကြေးရှိပါတယ်။ ဒါက အနည်းဆုံးရောင်းဈေးပါ။ အများဆုံးရောင်းဈေးက ဒေါ်လာ ၄၀၀ …
ကျွန်တော့်ရဲ့ steemit အစပိုင်းခရီးက အနည်းငယ်ကြမ်းတမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ပံ့ပိုးပေးမဲ့သူမရှိခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး @steempress-io ဆီကနေ အကူအညီရယူခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုဒီပကျော်ရဲ့ msu ကို ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ engagement လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်လာတဲ့အတွက် msu မှာ ပူးပေါင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့​ဒိအချိန်မှာ မြန်မာ steemit လောကက အကျပိုင်းကို ရောက်နေခဲ့ပြီ။ (ကျွန်တော့်အမြင်သက်သက်ပါ) msu လဲပဲ အကျပိုင်းကို ရောက်နေတာပါပဲ။ လူတွေ အတော်များများက စာမရေးကြတော့ပါဘူး။ သူတို့စဉ်းစားတာက ပိုက်ဆံမရရင် စာမရေးဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ အခွင့်အလမ်း တစ်ခုဆိုတာကို မေ့လျှော့နေခဲ့တယ်။ Steemit မှာ လူတွေများနေတဲ့အချိန် တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ပိုစ့်တင်တာ၊ comment ပေးတာ၊ …
game steem steemmonsters steempress
ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူ − ၄
ကမ္ဘာကြီးက ပြောင်းလဲလာနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အဲ့ဒိ အပြောင်းအလဲကို အမှီလိုက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုအမှီလိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ စာများများဖတ်မှ ရမှာပါ။ ဒီနေ့အတွက်အပြောင်းအလဲ တစ်ခုကတော့ Facebook ကနေ5dollar တန် credit တစ်ခုပေးတာပါ။ အဲ့ဒိ ငါးဒေါ်လာတန် credit ကို မိမိရဲ့ page ကို promote လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးပေးတာတော့ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးပါဘူး။ အခြားသူတွေရော ရသလားဆိုတာလဲ မသိရသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ရလာတဲ့ credit ကို ကျွန်တော့် page ကို ကြော်ငြာထည့်ဖို့အတွက် သုံးလိုက်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ HF20 ပြီးတဲ့နောက်မှဖြစ်လာတဲ့ အပြောင်းအလဲပါ။ အရင်ကဆို postpayout value တွေကမမှန်ပါဘူး။ အခုအချိန်မှာတော့ SP မပြောင်းလဲပဲနဲ့ကို ဈေးက နှစ်ဆလောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါကလဲ …
contest steem steempress
Share Your World – @mmunited
I like this contest along with payitforward contest. So I always try to participate in this contest. This contest is helding by @reonlouw.There will be5SBI share for tw0 winners and also3builds from steemitbuilder. These two will give life time upvote to you. Tell us aboutafunny family member or close …
RC နည်းနေလို့ upvote, comment ပေးမရတာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် blocktrades ကနေ SP တွေကိုလျှော့ဈေးနဲ့ ငှားပေးနေပါတယ်။ အရင်နှုန်းရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ ဘယ်လိုငှားရသလဲဆိုတာကို အောက်က video မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးလို့ရပါတယ်။ Source Video ဒါက အရမ်းကို ကောင်းမွန်တဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းလဲ တတ်နိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် ၂၅၀၀ လောက်ပဲကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိလောက်တောင် အရင်းအနှီး မစိုက်ထုတ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။ အရင်လို အလကားရတဲ့ခေတ်က ကုန်ဆုံးသွားပါပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ steemit အကောင့်တစ်ခုကို အလွယ်တကူဖန်တီးပြီး comment spamming လုပ်တဲ့သူတွေကအများကြီးပါ။ တူညီတဲ့ မှတ်ချက်တစ်ခုကို ပိုစ့်တွေအများကြီးမှာ လိုက်ရေးနေကြတဲ့သူတွေကလဲ အများကြီးပါ။ ဒါတွေကို ဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ်။ အရင်ကဆို steemit အကောင့်တစ်ခုကို အလွယ်တကူဖန်တီပြီး …
contest Network challenge steem steem-bounty steempress
This is the entry post for the contest called 100-steem-in-prizes-with-steem-bounty-let-s-ask-some-question. I normally setting upaquestion to make more engagement with people. I like his idea and thanks to @jmhb85 for making this kind of contest. How to participate: Participating is simple, just createapublication by askingaserious question or riddle. It can be any …
ပြီးခဲ့တဲ့ပိုစ့်မှာ youtube channel တစ်ခု ရယ် facebook ပေစ့်တစ်ခုရယ်ကို လုပ်ထားတဲ့ အကြောင်းရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ Dtube channel တစ်ခုကို ပါလုပ်ထားပါတယ်။ Youtube က ရေရှည် အကျိုးအမြတ်အတွက်ဖြစ်ပြီး Dtube ကတော့ ရေတို အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ခုနှစ်ရက်ပြည့်တာနဲ့ နောက်ထပ်ကြည့်သမျှအတွက်က ပိုက်ဆံမရတော့ပါဘူး။ youtube ကတော့ ကြည့်သလောက်ရနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ dtube မှာက copy right ပြဿနာရှိတဲ့ အတွက် dtube မှာအရင်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကဆို date package နဲ့သုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် youtube video တွေကို မတင်ဖြစ်ပါဘူး။ အခုအချိန်မှာတော့ monthly package ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် data တွေကို ပိုသုံးနိုင်လာပါပြီ။ ကျွန်တော် …
my new youtube channel and new facebook page
I can not update in time and my project in fundition is over. Currently I am trying to promote steem in myanmar. I setupayoutube channel and will make video about steemit, steem, other cryptocurrency like bitcoin. I made video with myanmar language. So my audience will only be myanmar. Here is my youtube …
Steem Sincerity analysis for some myanmar accounts
Steem Sincerity isaproject aimed at helping to address the spam problem we have on Steem. Steem Sincerity divided steemit accounts into three category: Spammers – generating significant spam, and little content of value Humans Content Creators – generating no (or very little) spam and valuable content Bots Today I has checked the posts …
Curation Initiative for Burmese Bloggers is starting
ဒီနေ့ကတော့ SMT အကြောင်းရေးရမည့်နေ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ initiative plan အကြောင်းရေးစရာရှိတာမို့လို့ SMT အကြောင်းကို မရေးတော့ပါဘူး။ အသေးစိတ်ကို အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ https://steemit.com/esteem/@mmunited/curation-initiative-for-burmese-bloggers-2c64cefee1292est အစီအစဉ်ကတော့ အပေါ်က ပိုစ့်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ လုပ်မှာပါ။ ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ “MMCG Curation Issue #1” လို့စပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုစ့်ကို စာလုံးရေ ၂၀၀ ကျော် ရေးစေချင်ပါတယ်။ စာလုံးရေ နှစ်ရာကျော်ဆိုတာကတော့ ပုံမှန် စာလုံးအရွယ်အစားနဲ့ရေးရင် စာကြောင်းရေ ၁၂ ကြောင်းခန့်ရှိပါတယ်။ Image Source နောက်ပြီးတော့ စာပိုဒ်ပုံစံနဲ့ရေးစေချင်ပါတယ်။ တစ်ကြောင်းရေးလိုက် တစ်ခါ enter ခေါက်လိုက်လုပ်ရင် စာကြောင်းတွေက တစ်ကြောင်းချင်းစီ ခွဲထွက်နေမှာပါ။ စာပိုဒ် တစ်ပိုဒ်ပြီးမှ enter တစ်ခါနှိပ်ပါ။ Facebook မှာ …
Abilities of Monsters
Opening second season rewarded packs